သရော်စာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 4
ရန်လိုကျွဲ ● မုန့်ဟင်းခါးထဲ အချိုမှုန့်မထည့်တော့ ဘာဖြစ်သွားသလဲ …?
ဖိုးထက် - ဘော်ဒီလိုးရှင်းနှင့် ပြောရေးဆိုခွင့်
သွန်းခ - သမ္မတကြီးပါးကို မနမ်းချင်တော့ဘူး
မောင်ဥက္ကလာ - ရာဇဝင်ထဲမှာ ထားရစ်ခဲ့တော့
အီကြာအော် ● ဖွတ်ကလေး၊ ပိုကီအွန်နှင့် ခက်သေးရွာမှ ပိုကီမွန်ဂိုးရောဂါ
မောင်ဥက္ကလာ ● ရေမြုပ်တာများ သတင်းလုပ်
ထူးထူး (တောင်ငူ) - သွပ်သွပ်ရဲ့ဖြစ်ပုံ
နိုင်ဝင်းသီ - ရုံးခန်းတခန်းနှင့် စကားစမြည်
ရန်လိုကျွဲ ● မုန့်ဟင်းခါးထဲ အချိုမှုန့်မထည့်တော့ ဘာဖြစ်သွားသလဲ …? (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၇ စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆရာကျွဲ ရုံးခန်း အတွင်း နံနက်စာ မုန့်ဟင်းခါးစားရန် ပြင် ဆင်နေစဉ် အကြံအစည်ကောင်းတစ်ခု...
ရန်လိုကျွဲ ● သတင်းသမားဘဝမှ လုပ်ငန်းရှင်ဘဝသို့ ….
ရန်လိုကျွဲ ● သတင်းသမားဘဝမှ လုပ်ငန်းရှင်ဘဝသို့ …. (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၇ ဆရာကျွဲနှင့်သားများ အတိုင်ပင်ခံ လုပ်ငန်းရုံးသည် ဒုက္ခသီရိနေပြည်တော်၏ အအောင်မြင်ဆုံး စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းငါးခု စာရင်းတွင် ငါးနှစ်ဆက်တိုက် ထိပ်ဆုံးမှ...
နိုင်ဝင်းသီ ● နာရီတလုံးရဲ့ အလျား (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၇ (တစ်) “ပေါင်တံရှည်တဲ့မိန်းမတွေဟာ နှလုံးရောဂါ အဖြစ်နည်းတယ်လို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဘရစ္စတိုတက္ကသိုလ်က သုတေသနလုပ်ပြီး သတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်ဗျ။ နှလုံးရောဂါနဲ့ပေါင်တံ အတိုအရှည်ကိစ္စဟာ ဘယ်နေရာမှာသွားပြီး...
မောင်ဥက္ကလာ – အတွဲအကွဲများနဲ့ ရွှေပြည်ဘုရားပွဲ
မောင်ဥက္ကလာ – အတွဲအကွဲများနဲ့ ရွှေပြည်ဘုရားပွဲ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၇ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရရင် ဒီရက်အတွင်း အခက်ဆုံးအလုပ်က စာရေးခြင်း။ ပြောချင်စရာ ရေးဖို့အကြောင်းအရာတွေ မရှိလို့မဟုတ်။ စာချစ်သူများ သိတော်မူတဲ့အတိုင်း ရွှေပြည်ကြီးမှာ ရေးစရာပြောချင်စရာတွေက...
သားကြီးမောင်ဇေယျ – နှင်းဆီနီနီ
သားကြီးမောင်ဇေယျ – နှင်းဆီနီနီ (ချစ်သူများနေ့အမှတ်တရ) (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၇ နှင်းဆီနီတပွင့် ထောင့် ငါးရာ ။ အဖိုးကြီးတွေ အဖွားကြီးတွေ ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ။ ဒီနေ့ ဒီအခါ...
သားကြီးမောင်ဇေယျ – ဦးနှောက် စားသွားကြပါဦး (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၇ မနက် ၈ နာရီလောက် တာမွေ အောင်မင်္ဂလာ လမ်းထိပ်က မြင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အခေါ် lower...
သားကြီးမောင်ဇေယျ – အိမ်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးမှ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး သို့
သားကြီးမောင်ဇေယျ – အိမ်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးမှ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး သို့ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၇ တဝေါဝေါ မည်နေတဲ့ အ၀တ်လျှော်စက် အသံတွေ ကြားထဲက “ဟေ့ ယောက်ျားရေ လျှော်ပြီးသား အ၀တ်တွေ လာလှန်းပေးဦး”...
အီကြာအော် ● ဖွတ်ကလေး၊ ဒေါ်နွယ်ထွန်းနှင့် ခက်သေးဈေးကွက် စီးပွားရေး (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၆ ခက်သေးတရွာလုံး “ကျပ်” ဈေးကျသဖြင့် ဗျောင်းဆန်နေပေတော့သည်။ ကျပ်ငွေကား ကျပြီးရင်းကျနေသဖြင့် ခက်သေးရွာ ၏ တက်ပြီးမကျ...
ပျော်တော်ဆက်သာဂိ – ကျေးဇူးတော်နေ့ ကြက်ဆင်တကောင်၏ မေတ္တာစာ
ပျော်တော်ဆက်သာဂိ – ကျေးဇူးတော်နေ့ ကြက်ဆင်တကောင်၏ မေတ္တာစာ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၆ ကျုပ်က ကြက်ဆင်တကောင်ပါ။ အမေရိကန်လိုဆိုရင်တော့ တာကီပေါ့။ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ဟာ အမေရိကန်လို အနောက်ကမ္ဘာက ကျေးဇူးတော်နေ့...
အီကြာအော် – “ဖွတ်ကလေး၊ နာရီတလုံးနှင့် ဗိုလ်အောင်ဒင်”
Cartoon Saw Ngo (2008) အီကြာအော် – “ဖွတ်ကလေး၊ နာရီတလုံးနှင့် ဗိုလ်အောင်ဒင်” (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၆ “ငါက ဗိုလ်အောင်ဒင် နင်က ဒါကိုမမြင်” ခက်သေးတရွာလုံး ထုံးစံအတိုင်း...
မောင်ဥက္ကလာ – ကောင်မလေးကို မထိနဲ့ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၆ ဤစာသည် ဘဝရှင်မင်းတရားကြီး၏ လျှိုဝှက်မှတ်တမ်းဘုတ်အုပ်ကြီးထဲ ရေးခြစ်ထားသော စာဖြစ်သည်။ အတွင်းလူယုံတော်တဦးမှ ကျွန်ပ်ထံ ပေးပို့လာသည့် ဤစာကို အများသူငါ သိစေလိုငှား...
မောင်ပိန်း – ညာသံတဦး၏ အာလူး မှတ်စုများ
မောင်ပိန်း – ညာသံတဦး၏ အာလူး မှတ်စုများ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နေ့က မောင်ပိန်းရဲ့ မီလျံဒေါ်လာတန်တဲ့ ဆန်ဖရန်မြိုံ့တော် တောင်ထိပ်က အိမ်တော်ကြီးကို မိုးမခအယ်ဒီတာ မောင်ရစ်တယောက်...
ပျော်တော်ဆက်သာဂိ – နောက်အင်္ဂါနေ့ အမေရိကန်က ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသမ္မတ ဒေါ်နယ်ဒတ် နိုင်ခဲ့သည် ရှိသော် …
ပျော်တော်ဆက်သာဂိ – နောက်အင်္ဂါနေ့ အမေရိကန်က ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသမ္မတ ဒေါ်နယ်ဒတ် နိုင်ခဲ့သည် ရှိသော် … (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၆ ပေါက်ပန်းဈေး လူကြမ်းကြီး ဒေါ်နယ်ဒတ် နိုင်သွားရင်...
မောင်လူရေး – ခရိုနီတွေထဲမှာ ဆိုက်ကားကို ထားရစ်ခဲ့
မောင်လူရေး – ခရိုနီတွေထဲမှာ ဆိုက်ကားကို ထားရစ်ခဲ့ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၆ အော် နိုင်ငံရေးများပြောပါတယ် … ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဆိုက်ကားသမားတွေ NLD မဲရရေး ချွေးနဲ့ရင်းကြ။ ခု မဲနိုင်အစိုးရဖြစ်တော့...
ရန်လိုကျွဲ ● ပေါ်ပြူလာခေါင်းဆောင် ပါတီပြောင်းခြင်း (သရော်စာ)
ရန်လိုကျွဲ ● ပေါ်ပြူလာခေါင်းဆောင် ပါတီပြောင်းခြင်း (သရော်စာ) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၆ ပြည်သူ့ပါတီသည် ယမန်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် သောင်ပြိုကမ်းပြို ရှုံးနိမ့်သဖြင့် အတိုက်အခံပါတီဘဝသို့ ရောက်ရှိနေသည်။ ပြည်သူ့ပါတီဟုခေါ်ရခြင်းမှာ ပြည်သူပိုင်အဆောက်အအုံ၊ ဘဏ္ဍာငွေတို့ကို အသုံးပြုပြီး...
ဂျော်ဒီး – မိုးမခရွာ ဂေဇက် (၉)
(မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၆ မိုးမခရွာလယ် ညောင်ပင်ကြီးအောက်တွင် မိုးမခရွာသားကလေးငယ်များ ငြိမ်သက်စွာ စုဝေးနေ ကြသည်..။ တကယ်ဆို သီတင်းကျွတ်ကျောင်းပိတ်ရက်ကာလမို့ သူတို့ ဆူညံပျော်ရွှင်စွာ ဆော့ကစား နေသင့်သည်မဟုတ်ပါလား..။ သို့သော်.. ယခုတော့သူတို့အားလုံး တိတ်ဆိတ်စွာ..မျက်နှာများ...
နိုင်ဝင်းသီ – ရုံးခန်းတခန်းနှင့် စကားစမြည်
နိုင်ဝင်းသီ – ရုံးခန်းတခန်းနှင့် စကားစမြည် (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၆ အစည်းအဝေးတဲ့။ ဘာအစည်းအဝေးမှန်းလည်းမသိ။ နေ့လည် တစ်နာရီတိတိ အချိန်မှာ မပျက်မကွက်လာရမယ်တဲ့။ ဒီကြားထဲ ပျက်ကွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ပျက်ကွက်တဲ့သူရဲ့ တာဝန်တဲ့။...
အဲဒိုဗေဒါ ● မြန်မာထမင်းဟင်း မကြိုက်သူများ တွေ့ဆုံပွဲ (သရော်စာ) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၆ အပေါစား မြန်မာထမင်းဆိုင်တွေ “ရပ်”..တဲ့။ တဖက်ကလည်း နင်တို့ အော်ခွင့်မရှိဘူး၊ စားတဲ့လူရှိလို့ ရောင်းနေတာ၊ နင်မကြိုက်ရင်...
နိုင်ဝင်းသီ ● ဂျူရီလူကြီးတယောက်နှင့် စကားစမြည် (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆ “အရှေ့အရပ်၌ မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော အနန္တစကြဝဠာမှ အနန္တသတ္တဝါအပေါင်းတို့ သည် ဘေးရန်ခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ ဒေါသခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။ နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေသတည်း။ အနောက်အရပ်၌...
ဂျော်ဒီး ● ဝန်းရံမှုကြောင့် နံရတယ်
ဂျော်ဒီး ● ဝန်းရံမှုကြောင့် နံရတယ် (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂ဝ၁၆ ဒီမိုးနဲ့အတူ ဒီရေစီးထဲမှာ ဒီအမှိုက်တွေက ပေါလောပေါလော။ အဆိုးဆုံးကား ကြွပ်ကြွပ်အိတ်အမှိုက်များပင်။ ကြွပ်ကြွပ် အိတ်အမှိုက်များကား မီးပုံရှို့လို့လည်း မရ။ တခြားအမှိုက်များလို...